एसिया कपको फाइनल आज, भारतसँग बदला लिने बंगलादेशको दाउ ! - एसिया कपको फाइनल आज, भारतसँग बदला लिने बंगलादेशको दाउ !
एसिया कपको फाइनल आज, भारतसँग बदला लिने बंगलादेशको दाउ !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १२ आश्विन, 01:04:21 AM
युएई । एसिया कप क्रिकेटको फाइनल आज हुदैछ । उपाधिका लागि आज दिउँसो भारत र बंगलादेश भिड्दैछन । खेल बेलुकी सवा ५ बजे अबुधाबीमा शुरु हुनेछ । भारतले सुपर फोरमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हराएर फाइनल पुगेको हो । तर भारत अफगानिस्तानसँग बराबरीमा रोकिएको थियो ।
बंगलादेशले भने अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई हराएर भारतसँगै फाइनल भेट पक्का गरेको हो । प्रतियोगिताभर भारत अपराजित टिम हो । बंगालादेशले पनि श्रीलंका र पाकिस्तानलाई हराएर फाइनल पुगेको हो ।
बंगलादेशका मुसाफिकर रहिम निर्क उत्कृष्ट लयमा छन । उनले दुई प्रतियोगिताभर झण्डै दुई शतक बनाएका छन ।
बंगलादेशले बदला लिन सक्ला ?
रहिमकै प्रदर्शनको बलमा बंगलादेशले गत चैतमा भारतसँग व्यहोरेको हारको नमिठो बदला लिने सोच बनाएको छ । गत चैतमा बंगलादेशमै भएको निदहास ट्रफीमा भारतले अन्तिम ओभरमा चमात्कारिक प्रदर्शन गरेर उपाधि जितेको थियो ।
उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर जित नजिक पुगेको बंगलादेशको उपाधि उचाल्ने सपनालाई भारतका दिनेश कार्तिकले तुषारापात गरेका थिए । उनले ८ बलमा २४ रन जोडेका थिए । त्यसमा पनि अन्तिम बलमा जितका लागि ५ रन चाहिएकामा कार्तिकले छक्का हानेर भारतलाई ऐतिहासिक जित दिलाएका थिए ।
उनै कार्तिक अहिले भारतीय टिमको मध्यक्रमका मुख्य हतियार छन । शिखर धवन र रोहित शर्मा पनि राम्रो फर्ममा भएकाले भारतले सहजै उपाधि जित्ने अपेच्छा बनाएको छ ।
२०७५, १२ आश्विन, 01:04:21 AM